TANAMBAO SOTEMA : Vehivavy iray nanaovana lehilahy enina fanolanana tambabe
Vehivavy iray telopolo taona avy namonjy forazaza ka somary mamomamo no niarahan’ny lehilahy miisa enina nanolana, tao amin’ny sektera fahaenina Antanambao Sotema. 31 juillet 2019
Tsy avy eo Antanambao Sotema izy io, hoy ny sefo sektera iray. Tonga teo ny fianakaviany ka tamin’izany no nahafantarana fa avy any Ambohimandamina. Nentina tao amin’ny CSB izy, ka hita fa nivonto ny lohany sy ny fivaviany. Noraisin’ny fokontany sy ny mpitsabo tao an-tanàna izy ary nomena saran-dalana bajajy avy eo. Amin’izao fotoanan’ny forazaza sy famadihana izao dia misy efatra ny alim-pandihizana isaky ny sektera isaky ny sabotsy sy alahady. Tsy misy manara-maso ireny fety ireny matetika ka sady mitabataba no manakorontana ny torimason’ny hafa amin’ny alina.
Efa maro ny nitaraina fa tsy misy mihaino. Io Tsimandrimandrin’ny forazaza sy serana io ihany koa dia manamora ny firaisana ara-nofo eo amin’ny zaza tsy ampy taona, satria dia toaka ihany no misy amin’ireo fa tsy misy sakafo akory. Samy mamo na ny tovovavy na ny tovolahy satria mandritra ny alina maromaro ny fety. Ny mozika alefa mafy ka tsy ifandrenesana izay ataon’ny tsirairay sy ny rehetra. Manafatra ny tompon’andraikitra amin’ny fokontany mba samy hitandrina ny tsirairay indrindra ny tovovavy, ka tsy handeha irery fa mba manao diabe, ary ihany koa tsy hisotro toaka tafahoatra tsy hahatsiaro izay ambonin’ny tany intsony. Efa nambara teny ombieny ombieny ny tokony hamehezana ireny fetin’ny serana sy forazaza ireny. Tamin’ny herintaona dia zaza iray efatra taona teo no maty kilan’ny afo satria lasa nandeha namonjy forazaza ny reniny dia navela irery tao an-trano ilay zazakely.